Guddoomiyaha Baarlamaanka oo amray si deg deg ah loo xalliyo cabashada xujeyda Soomaaliyeed
Sagal Radio Services • News Report • July 23, 2018
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta la kulmay guddiga Garsoorka, Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee golaha shacabka.
Dowlada Federalka oo ka hadashay dagaalka saaka ka dhacay Baar Sanguuni
Dowlada Federalka ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay weerar saaka waaberigii ay ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Alshabaab saldhig ay ciidamada dowlada ku lahaayeen deegaanka Sanguuni oo qiyaastii 50km u jira magaalada Kismaayo.
Wasaarada Kalluumeysiga oo digniin ka soo saartay Bad Xiranka
Wasaaradda Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka Badda ayaa uga digtay Dhammaan kalluumeysatadda Soomaaliyeed in ay badda galaan inta lagu guda jiro bad xiranka taasi oo ay suurtagal tahay in kaluumeeysatada ay dhibaatooyinka kala kulmaan gudaha badda.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo xil ka qaadis ku sameeyay Wasiir ka tirsan Xukuumadda
Sagal Radio Services • News Report • November 26, 2017
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhow xil ka qaadis ku sameeyay Wasiirka Ow-qaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya Dr. Iimaan C/llaahi Cali.
Madaxweyne Farmaajo “Ciidanka Xoogga dalka waa Geesiyaal Sooma-jeestayaal ah”
Sagal Radio Services • News Report • September 9, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa kormeer ku tagay Dugsiga tababarka ciidamada ee Jeneraal Goordan ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Maaliyadda oo lacagtii ugu badneyd hal maalin ka aruuriyay canshuuraha Qaadka
Sagal Radio Services • News Report • April 9, 2017
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle oo uu wehliyay Wasiiru dowlaha Wasaaradda Maaliyadda ayaa shalay kormeeray ku tagay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, halkaasoo Wasaaradda Maaliyadda ku canshuurto Qaadka ka yimaaday dalka Kenya.
Wasiirka Warfaafinta oo shaqo ka fariisin ku sameeyay Agaasimihii Guud ee Wasaaradda
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa shaqo ka fariisin ku sameeyay Agaasimihii Guud ee Wasaaradda C/risaaq Cali Yuusuf Bahlaawi iyo Agaasimaha Maamulka oo lagu magacaabo Xasal Basal.
Qaramada Midoobay oo sheegtay in 60 kun oo qaxooti Soomaaliyeed ah dib loo soo celiyay
Hay’adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee lagu magacaabo UNHCR ayaa ku sheegtay in dalka Soomaaliya ay dib ugu soo celiyeen Qaxooti ku dhow 60 Kun, taasi oo ah tiradii ugu badneyd oo dalka dib ugu laabta.
Xukuumadda Soomaaliya oo ka digtay in xilliga kala guurka la boobo hantida qaranka
Iyadoo Soomaaliya gashay marxalad kala guur ah, lana filayo in dhamaadka sanadkan uu dalka ka dhaco is bedel, marka la gaaro doorashooyinka ayaa Xukuumadda Soomaaliya waxay ka digtay in la boobo hantida qaranka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo ka hadlay Gabar Soomaali isku gubtay Jaziirada Nauru
Ruushka oo diyaar u ah inuu hub ka iibiyo Soomaaliya, marka laga qaado cunaqabateynta
Sagal Radio Services • News Report • April 21, 2016
Dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay hub ka iibin doonto dowladda Soomaaliya, markii laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran.
Ciidamada Kumaandooska oo xalay howl gal ka fuliyay duleedka Kismaayo
Ciidamada Kumaandooska ayaa xalay howl galo ka fuliyay deegaan lagu magacaabo Janaay Cabdalla oo qiyaastii 60Km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo.
Midowga Yurub oo ka dalbatay dowladda Federaalka inay joojiso xukunada dilka ah
Sagal Radio Services • News Report • October 10, 2015
Midowga Yurub ayaa sheegtay in aysan marnaba raalli ka aheyn xukunada dilka ee ay fuliso dowladda Federaalka, taasoo lagu tilmaamay inay ka dhigan tahay xagudub xuquuqdaha aadanaha.
Shirka Golaha Wasiirada kulankoodii Todobaadlaha ahaa
Sagal Radio Services • News Report • August 7, 2015
Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulankoodii caadiga ahaa, waxaana shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda F. Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte, iyadoo kulanka ay goob jog ahaayeen Taliyeyaasha Ciidamadda. Waxana shirka looga hadlay qodobo dhowr ah.
Sagal Radio Services • News Report • March 8, 2015
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay dhameystirka shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega Gobolada Dhexe ee ka socda magaalada Dhuusa Mareeb ee Gobolka Galgaduud.
Dowladda Soomaaliya oo Saraakiil sar sare u xirtay Weerarkii Hotel SYL ee dhacay bishii Janaayo
Dowladda Soomaaliya ayaa saraakiil sar sare oo ka tirsan laamaha ammaanka dowladda u xir xirtay weerarkii bishii Janaayo lagu qaaday Hotel SYL oo ku dhow agagarka Madaxtooyada, iyadoo xilliga uu weerarkaas dhacayay ay hotelka ku sugnaayeen wafdi Turkish ah.
XASAN SHIIKH: Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa u billowday xiriir taariikhi ah
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sh. Maxamuud ayaa maanta kumanaan shacabka Itoobiya ah khudbad ugu jeediyay garoonka ciyaaraha ee magaalada Mekelle, halkaasoo ay ka dhacday munaasabad lagu xusayay 40-guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ururka Tigray People’s Liberation Front (TPLF) oo qayb ka ah is-bahaysiga EPRDF ee haya talada dalka Itoobiya.
Qaadkii la keeni jiray Somalia oo hakad la geliyay iyo Ganacsato ka Hadashay
Sagal Radio Services • News Report • February 15, 2015
Ganacsatada Qaadka Soomaaliya u soo rari jiray ayaa sheegay inay hakad geliyeen ganacsigooda, iyagoo sababta ku sheegay in lacagaha can-shuuraha ah ee Somalia looga qaado ay sare loo qaaday, sidoo kalena uu jaadku qaali ka noqday Kenya.
Soomaaliya oo kaalinta hoose ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka (Akhriso)
Sagal Radio Services • News Report • December 5, 2014
Warbixin cusub ee ay sanadkan soo saartay Ururka Transparency International ayaa looga hadlay heerka musuq maasuqa caalamka, iyadoo Soomaaliya ay ka gashay meesha ugu hooseeysa liiskan.
Ra'iisul Wasaaraha oo ka mahad celiyay agab ciidan oo Talyaaniga ugu deeqday Ciidamada (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 2, 2014
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Talyaaniga taageerada ay u fidiyeen ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay ifafaalaha dib u soo laabashada xiriirkii soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeyey dawladdaha Soomaaliya iyo Talyaaniga.
Shirka maal gashiga oo si rasmi ah kaga furmay Magaalada Dubai
Waxaa maalintii labaad galay shirka bandhigga wax-soo-saarka iyo maal-gashiga Soomaaliya oo ka furmay xarunta ganacsiga adduunka ee Dubai (Dubai World Trade Center).
Sagal Radio Services • News Report • February 15, 2014
Guddiga Qaramada Midoobay u qaabilsan la socodka cunno-qabteynta hubka ee Soomaaliya iyo Eratria ayaa ka dalbaday Golaha Ammaanka in si buuxda loogu soo rogay Soomaaliya cunnoi-qabateynta hubka ee sannadkii hore laga qafiifiyay, kaddib markii dhawaan ay soo shaac baxday in dowladda Somalia ay hub kala duwan ka iibisay Al-shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in Saraakiil Mareykanka ku sugan yihiin Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horeysay xaqiijisay in Saraakiil Mareykan oo ah La Taliyeyaal ay ku sugan yihiin Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho kadib markii dowladda Mareykanka ay qiratay in Saraakiil tiro yar ay u dirtay Soomaaliya, si ay u caawiyaan Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda.